Audinate na-enye Seminar na Adapting Music Education maka COVID na Dante N'oge NAMM 2021 | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » Audinate na-enye Seminar maka imeghari Mmụta Egwu maka COVID na Dante N'oge NAMM 2021
Ọzụzụ na Dante AV na Dante Asambodo Ọkwa 1 na 2 dịkwa
Audinate na-enye nzukọ ọmụmụ ihe n'efu n'oge NAMM 2021 na isiokwu nke "tinglaghachi na Mmụta Egwu na Ọrụ Live Live Performance." Nzukọ ọmụmụ ihe ahụ na-enyocha otú Dante si enyere ọtụtụ ụdị ọrụ dị iche iche aka ma na-enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nchekwa ụlọ maka mmadụ niile.
Ihe ozo di na ya bu ntughari ohuru nke ihe ngbanwe nke Dante AV video-over-IP site na Audinate, na Level 1 na 2 nke akwukwo nzere Dante a ma ama. Nke ahụ pụtara na n'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa, yana n'agbanyeghị agbanyeghị mmekọrịta gị na Dante, ị nwere ike nweta ọzụzụ bara uru na nghọta bara uru maka iji Dante na ụwa n'ezie, njikọ AV-over-IP.
Nzukọ ọmụmụ ihe na ọzụzụ na-amalite na Jenụwarị 18, agbanyeghị, vidiyo ga-adị na ịchọrọ site na February. Ndebanye aha maka ihe omume dị ugbu a www.audinate.com/NAMM21
Laghachi na Mmụta Egwu Ugbu a
Ọ bụrụ n'ịgbalị iji Nzukọ Mbugharị maka otu egwu ma ọ bụ ihe omume ukwe, ị maara igbu oge (nkwụsị) nke usoro a dị oke elu maka ịmekọrịta egwu. Nwere ike ịrụrụ ibe gị ọrụ, mana ị nweghị ike ịrụkọ ọrụ ọnụ. Agbanyeghị, netwọkụ Dante nwere obere ihe eji arụ ọrụ dị afọ iri ma nwee ike idozi nsogbu ahụ ugbu a.
Sonyere anyị maka mkparịta ụka banyere akụkọ na-akpali akpali nke ndị na-akụzi egwu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na mahadum iji Dante jikọta ndị na-eme ihe site na ebe dị iche iche. Ndị a bụ akụkọ ị nwere ike ịmegharị na mmemme nke gị, taa. Ndụmọdụ gbasara gbasara gbasara mbara igwe, ijikọ ọtụtụ oghere iji tinye ọgbakọ zuru oke nke na-agaghịzị abanye n'otu ọnụ ụlọ, ma a ga-atụlekwa ụzọ iji wee nwee nnukwu ego na netwọkụ kampos gị.
N'ikpeazụ, anyị ga-egosi otu netwọkụ Dante ị ga-esi ga-aga n'ihu na-eje ozi n'ime ụwa nke ọrịa na-efe efe wee bụrụ ngwa ọrụ na -emepụta ohere agụmakwụkwọ ọhụrụ
Na-ewebata Dante AV - Video maka Ngwọta Dante
Dante bụ usoro ịkparịta ụka ntanetị nke na-akwọ ụda ụwa, ma Dante AV na-eweta vidiyo na ikpo okwu. Sonyere anyị maka ọzụzụ na uru nke ijikọ Dante ọdịyo na vidiyo ọnụ, ma hụ ngosipụta na azịza ọhụụ a dị ịtụnanya!
Dante Asambodo Ọkwa 1: Dante bu ihe nlere nke uzo AV nke uwa na ihe de facto na uzu ndi oru taa. Klas a na-enye ntọala na echiche ọdịyo, vidiyo na ịkparịta ụka n'--ntanet - na ọ nwere ike ịbụ ihe niile achọrọ iji kpokọta ma rụọ obere Dante sistemụ na otu, raara onwe ya nye. Emechaa nnọkọ a, ndị bịara ya kwesịrị ịbụ aka tozuru oke iji zue Dante Level 1 Asambodo ule.
Dante Asambodo Ọkwa 2: Klaasị a na-aga n'ihu site na echiche ntọala sitere na Dante Asambodo Ọkwa 1, 2021 Edition. Ndị bịaranụ ga-amụta nka iji wuo ma rụọ ọrụ netwọkụ dante buru ibu gafee ọtụtụ ngbanwe, yana netwọkụ na-enweghị isi ma kesaa bandwit na ọrụ ndị ọzọ. Emechaa nnọkọ a, ndị bịara ya kwesịrị ịbụ ndị tozuru oke iji wee mezue Dante Level 2 Asambodo ule.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Audinate, gaa na www.audinate.com
Banyere Audinate Group Limited:
Audinate Group Ltd (ASX: AD8) nwere ọhụụ ịsụ ụzọ n’ọdịnihu AV. Onyinye Audinate nke na-emeri Dante AV n'elu ihe ntanetị IP bụ onye ndu ụwa niile ma jikwa ya nke ọma na ụda ndụ ọkachamara, ntinye azụmahịa, mgbasa ozi, adreesị ọha na eze, na ụlọ ọrụ ndekọ. Dante dochiri eriri analogue nke ọdịnala site na ịnyefe akara ngosi nke ọdịyo na vidiyo n'ụzọ zuru oke, n'ọtụtụ ebe n'otu oge, na-eji ihe ọ bụla karịa eriri Ethernet. Audinate dị n’isi obodo Ọstrelia ma nwee ọfịs mpaghara na United States, United Kingdom na Hong Kong. Teknụzụ Dante nwere ikike sitere na narị otu narị ndị nrụpụta AV na gburugburu ụwa. A na-ere ahịa mbak ụlọ ọrụ na Australian Securities Exchange (ASX) n'okpuru akara akara AD8.
Dante na Audinate bụ ụghalaahia edenyere nke Audinate Group Ltd.
Previous: Streamland Media mara ọkwa ebumnuche inweta Technicolor Post Business si Technicolor
Osote: MTJIBS NA-EGBU AGBAGBUGHEF KWES PR WITH KWES WITHR WITH NA AGITO